Sweet Victory Video — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
guusha macaan!!!!!!!!!!!! Jacaylka macaanka this.
Namibia jecelyahay aad TOD '..
nimcadiisa idinla jiri karaa oo dhan maalmaha nin nolosha.
ka MAKAY • July 28, 2015 at 1:53 pm • Reply
Waan jeclahay this song. Uur sida waxyoonay
Tirsaah • July 28, 2015 at 1:55 pm • Reply
Ku mahadsan tahay in aad safar ah deminta album kale oo si sharaf noo Qaadirka King. Victory Sweet waa dhawyahay oo aan jecel nahay in qalbigayga. At riwaayad ee Plano, TX, this song dareemay sida gabay cibaadada lagu jiro riwaayad iyo waxa waqti fiican cibaadada waxa uu ahaa. Ka dhig isaga lagu maamuusayo ammaanaya oo u!!
Taas macneheedu SWHEET!!!
Ku mahadsan tahay in aad safar Lee aad daacadnimo. album waxay igu dhiirri-galiyay waqtiga ugu adag ee noloshayda. Tani waa mid ka mid ah heesaha aan ugu jeclahay on album ah. #SweetVictory
“Rooti in Boqorku, boodin in saqafka, Dareen wanaagsan aan gon 'inay ka sameeyaan ilaa dhamaad ah
Waxaad i maqal, holla haddii aad i dareento, Waxaan weli xitaa socda in kastoo aannu dhaawac
Sidaas uusan gaariga wakiil ah “Life Christian” ama u matalaan “Ciise”? Ama ma waxa ay ka dhigan labada? Si kastaba ha ahaatee, video ah i geeyey ilmada.
Keinya • September 7, 2015 at 10:28 waxaan ahay • Reply
Jacaylka this video. Calaamad on heerarka badan! Waad ku mahadsan tahay wixii aad samayn…waxa Eebe ma dhex aad si qoto dheer waxaa la dareemay.
ManuelAdams • September 16, 2015 at 11:57 waxaan ahay • Reply
farriinta injiilka iyo theme dhexe ee Victory iyada oo cadaadis iyo tijaabooyin waxaa sidaas maanta loo baahan yahay. My salaadda waa in dad badan ay qaataan doonaan kiraystaha muhiim ah laga faafiyay in this song iyo video. Ilaah ku sii karaa in aad loo Waxyoodo ahayn inuu saameyn ku dhex dhigin hadiyadihiinna.
Trip, aad ii saamaysay in badan oo ka mid ah siyaabaha. Waad ku mahadsan tahay ereyga Ilaah dadkii oo dhan ku faafo. Waan jeclahay shaqadaada iyo waxa aad ku leeyahay. Ilaah ha barakeeyo!
Leslie wanaagsan Response • November 6, 2015 at 9:36 waxaan ahay • Reply
Ka dhig u adeegi Trip!….Your music waxaa caawiyay daqiiqado aan dhaadheer ee noloshayda. baadhi Soul. #Kaca
Taasi Trip laga cabsado,Rabbigu wanaagsan kordhin kartaa fariimaha uu aad ee….Ilaah waa xoog #RandomBars aad
Victory Sweet!!! Winter Jam 2016 Knoxville, TN. Ma sugi karaa in aad la caabudaan!
BrendaHohensee • February 15, 2016 at 11:46 waxaan ahay • Reply
Aan ku dhawaaqay markaan daawado this video sababtoo ah waxa ay iga dhigtay qabaa oo ka mid ah halganka aan ku dhex sanadkii hore u baxay iyo sida ay u xajin sii darayso laakiin aan ilaa siinta iyo Ciise dhamaadka’ nimcada igu lagu badbaadinayo!!!
Kianna • Laga yaabaa 20, 2016 at 4:12 pm • Reply
Fikradda of this video waa mid aad u relatable. Waxaan ku riyaaqay Daawasho.
Patrick • Laga yaabaa 23, 2016 at 11:48 pm • Reply
Waan jeclahay habayn this soooo maydhan biyaha badan! ma tirin karaa hits celiska.
Waa song la yaab leh, ma heli qaldan igu, laakiin ma run ahaantii aad u leeyihiin in ay isticmaalaan erayga “** ah” si aad u sharaxdo?
Man, Anna waxaan soo qaaday markii ay dib u eegaan lyrics in ay this song. i sii daa kaliya dhihi waan jeclahay fariin ka dambeeya gabaygii. guushii kama danbaysta ahi waa dhimashada in Masiixu u dhintay. Haa, dabadeedna wuu dhintay, laakiin kacay xoog oo dhan. TRIP LEE, Ilaah ha idin barakeeyo,!!!!!!!!!!!!!
daroogada!!! Sidaas laga cabsado, Ilaah sooooooooooo wanaagsan. Waxaa barakaysan kan Rabbiga magiciisa ku imanaya Rabbiga! :) Wow, ii soo sheeg haddii aad u baahan tahay Salaadda, qof. :) Isaguna waa u jawaabi doonaa!